Nhepfenyuro dzeChechi dzeApple 2 dzinoshambadzira zviziviso zvezororo
Apple yakabudisa zvivako zviviri zvitsva zvezviitiko zveApple Watch Series 2, vachivimba kuti ichabatsira hutano uye inoshanda zvakanyanya.
Iyo Cupertino tech goliath inogona kushandisa zvakanakisisa zvayo kubva kune iyo iPhone yakakura inobata gore rino nekusvika kweiyo ichangobva kunaya iPhone 7 uye 7 Plus nemakhamera maviri, zvisinei ndezvakaitwa nenyaya dzose dzinenge dzichienda pane zvose kuunza smartwatch zvadzo kusimudzira uye kudzora zvinyorwa zvisingabvumirwi zvekuti hazvisizvo zvinozivikanwa sehurumende dzinodaro.
Sekupedzisira, zvipo zvevashandi vose - kwete Apple chete - vakapoteredza kupfuura 50 muzana. Urongwa hutsva hweApple hwekutsvaga hunobudiswa musi weChishanu huri Apple Watch Series 2 se "nzira chaiyo yehupenyu gadget."
I10-ku16-yechipiri inodhindwa inosanganisira nzvimbo kubva kune izvo zvinoita seLos Angeles neEsia, studio yokufamba, uye kunze kwekukwikwidza kwebhola. Kusimudzirwazve kunowedzera pamusoro pekuparadzanisa kwakasiyana kwechinhu ichi, pamwe nemusikana achichizarura sechikomborero - achifungidzira kuti ichaita mamiriro asingakanganisiki kweKrisimasi!
Mashable akachengetedza kuti Apple Watch iri kutyaira mu smartwatch showcase, asi sangano rakaramba kuzarura vhidhiyo nhamba nhamba dzegadget yavo, zvichiita kuti vakawanda vasazivikanwe.
Kunyange zvakadaro, Apple CEO Tim Cook inoshushikana nechipiri musi weChipiri kuburikidza ne email kune Reuters kuti "ruzivo rwayo runoratidza kuti Apple Watch iri kuita zvisingaiti uye inoratidzika seyikumira pakati pezviitiko zvakapararira zviitiko gore rino."
"Mazano ekufambisa ari kunze kwemairafu. Chokwadi chinotaurirwa, pakati pevhiki huru yekutengesa Krisimasi, kupa kwedu kuburikidza neApple Watch kwaive kwakakurumbira kudarika vhiki ipi neipi munhoroondo yenyaya yacho. Zvakare, sezvataitarisira, tiri panzira yepamusoro yechina yeApple Watch, "Cook akanyora.
Facebook CEO Mark Zuckerberg Anovaka "Jarvis" Software Butler Yeimba Yake